ब्रिटिश संग्रहालय भ्रमण गर्नुहोस् यात्रा समाचार
युरोपमा मुठीभर संग्रहालयहरू छन् जुन उनीहरूको संग्रहको मूल्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, र ती मध्ये एउटा हो ब्रिटिश संग्रहालय वा ब्रिटिश संग्रहालय। यस संग्रहालय भित्र लन्डन यो अद्भुत छ किनकि यसले धेरै मूल्यवान खजाना राख्छ।
मेरो अर्थ, यसको खजाना विश्व को धेरै भागहरु बाट आउँछ त्यसोभए यदि तपाइँ अ capital्ग्रेजी राजधानीमा यात्रामा जानुहुन्छ भने उनीहरूलाई भेट्न र भेट्न यो धेरै राम्रो विचार हो। यहाँ हामी तपाईंलाई छोड्ने सबै चीजहरू तपाईंलाई छोड्छौं भ्रमणको योजना बनाउनुहोस्।
1 ब्रिटिश संग्रहालय
2 ब्रिटिश संग्रहालयको भ्रमण गर्नुहोस्
यो १1753 मा स्थापना भएको हो र भएको शीर्षक होल्ड गर्दछ नि: शुल्क प्रवेशको साथ विश्वको पहिलो सार्वजनिक संग्रहालय। १ XNUMX औं शताब्दीमा यसलाई एक वर्षमा thousand००० मानिसहरूले भेट्न आएका थिए र आज यो अनुमान छ कि यसमा million० लाख आगन्तुक छन्।
संग्रहालय सर हान्स स्लोएन, एक महान कलेक्टरको प्रेरणा र चासोबाट जन्म भएको थियो 70०,००० भन्दा बढी वस्तुहरू जुन उहाँ आफ्नो मृत्यु पछि हराउन चाहनुहुन्न। त्यसोभए उनले राजा जर्ज द्वितीयलाई २०,००० डलरमा आफ्नो सम्पूर्ण संग्रह दान गरे। राजाले स्वीकार गरे र १ 20 मा संग्रहालयको आधार कानूनी बनाइयो। तर कुन निजी स made्ग्रहले यी निजी संग्रह बनायो? पाण्डुलिपिहरू, पुस्तकहरू, प्राचीन वस्तुहरू, प्रिन्टहरू, पदकहरू, सिक्का, स्केचहरू, प्राकृतिक नमूनाहरू ...
नयाँ १1759 XNUMX in मा संग्रहालयले यसको ढोका खोल्यो। उनले यो सबभन्दा पहिले मोन्ट्यागु रेसिडेन्समा गरेका थिए, जुन १th औं शताब्दीको ब्लोम्सबरीमा रहेको घर हो। त्यस समयमा प्रवेश नि: शुल्क थियो र यसले कहिले पनि यसको ढोका बन्द गरेन, दुई विश्वयुद्धको बेला पनि। हो वास्तवमा, त्यो पहिलो संग्रह १ th औं शताब्दीमा धेरै विस्तार गरिएको थियो, शाही शताब्दी बराबर उत्कृष्टता।
अफ्रिका, अमेरिका र एशियामा युनाइटेड किंगडमको साम्राज्यवादी उपस्थितिले यसलाई वास्तविक खजाना कमायो। यद्यपि उनीहरू आएर आएका देशहरूले यी जग्गा खजानाहरू फिर्ता गराउने इच्छा व्यक्त गरे पनि यस सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन। यसैले, संग्रहालयले राख्ने विदेशी खजानाहरू मध्ये एक हो गुलाब पत्थर (पत्थर जसले हाइरोग्लिफिक्सको विवादास्पदलाई अनुमति दियो), शास्त्रीय मूर्तिकलाहरू र पार्थेनन मूर्तिकलाहरू.
स The्ग्रहालयको प्राकृतिक स्ग्रह १ 80 late० को अन्ततिर दक्षिण केसिington्टनको मुख्यालयमा लगियो र प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बन्न पुग्यो। यदि १ th औं शताब्दी सlections्ग्रहको विस्तारको शताब्दी हो, बीसौं शताब्दी संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत सेवाहरु को छ। शैक्षिक कार्यक्रमहरू विकास गरियो, हलहरू पुनर्स्थापित गरियो, र महत्त्वपूर्ण स्थायी प्रदर्शनहरू स्थापना भए जस्तै दृष्टान्त: डिस्कवरी, १ XNUMX औं शताब्दीको संसार.
Ya २१ औं शताब्दीमा संग्रहालयले यसको खजाना विस्तार गर्न जारी राख्यो चिनियाँ सिरामिकहरू, सबै प्रकारका घडीहरू र एक चैपल चिहान, नेबामुनको, मिश्री मूलको।
संग्रहालयमा तपाईं मेट्रो, बस वा साइकलबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा नजिकको नली स्टेशनहरू होलोबिन, टोटेनहम कोर्ट रोड, गुज स्ट्रिट र रसल स्क्वायर हुन्। नयाँ अक्सफोर्ड स्ट्रीटमा रोक्ने बसहरू १,,, १,, २,,, 1,, 8, 19 and र २25२ हुन्। जो टोटेनहम कोर्ट रोडको उत्तरमा र गभर स्ट्रीटको दक्षिणमा रोकिन्छन् ती १ 38, २,, २,, 55 98, १ 242 र 14 24 ० हुन्। साउथेम्प्टन रोमा रोकिनेहरू 29,,। 73, X134,, १, १390 र १59 हुन्।
यदि तपाईंले बाइक भाँडामा लिनुभयो भने त्यहाँ ग्रेट रसल स्ट्रीटमा म्यूजियम फाटक भित्र चक्र पथहरू छन्। सबैभन्दा नजिकको बाइक स्टेशन गेट्सको ठीक छेउमा छ, ग्रेट रसल स्ट्रीट र मोन्टोग सडकको कुनामा।
संग्रहालय सबै वर्ष भर खुल्छ तर जनवरी १ र डिसेम्बर २,, २ 1 र २ on मा बन्द हुन्छ। संग्रहालय ग्यालरीहरू दैनिक बिहान १० देखि pm बजेसम्म खुल्छन् र शुक्रबार साँझ 10::5० सम्म नजिक छन्। तिनीहरू साँझ 8:२० बाट र शुक्रवार 30:२० बाट बन्द हुन थाल्छन्। छुट्टीहरूमा खोल्नुहोस् तर दिमागमा राख्नुहोस् कि निर्देशित यात्रा र कुराकानी सीमित छन्।
सूचना अदालतको साथ ग्रेट कोर्ट प्रत्येक दिन बिहान9देखि साँझ and सम्म र शुक्रवार बिहान :6: .० सम्म खुला रहन्छ। बक्स अफिस बिहान 8 देखि साँझ 30 सम्म र शुक्रवार शुक्रबार साँझ :9::5। सम्म खुला छ। जस्तो तपाईले पत्ता लगाउनुहुनेछ शुक्रबार घण्टा बढाइन्छ।
र त्यहाँ भेट्न के छ? संग्रहालयका बिभिन्न विभागहरू छन्अफ्रिका, ओशिनिया र अमेरिका, प्राचीन इजिप्ट र सुडान, एशिया, सिक्का र पदकहरू, ग्रीस र रोम, मध्य पूर्व, प्रागैतिहासिक र युरोप, प्रिन्ट्स र ड्रइings। यदि तपाईंसँग धेरै पहिलेको ज्ञान छैन र तपाईंको विचार सिक्नु छ भने, यसका लागि साइन अप गर्नु राम्रो हुन्छ स्वयंसेवकहरु संग यात्रा। यी भ्रमणहरू अधिकतम २ people व्यक्तिको समूहको लागि हो।
को विशेष बिहानको भ्रमण, त्यसैले तिनीहरू भनिन्छ, तिनीहरू बिहान at बजे सुरु हुन्छ र अन्तिम घण्टामातस्बिर लिनको लागि समय सहित। केवल अनलाइन बुक गर्नुहोस् र तपाईंको प्रिन्ट गरिएको बुकि on कन्फर्मेसनको साथ ग्रेट रसल स्ट्रीटमा .::० बजे मुख्य प्रवेशद्वारमा जानुहोस्। यी भ्रमणहरू बेलायती संग्रहालयको बारेमा छन् आफैलाई, वा उहाँ मा प्राचीन मिस्र वा बारेमा चीन। टिकट लागत प्रति वयस्क £ 30 र and र १ between बीच उमेरका बच्चाहरुका लागि १5पाउण्ड लागत।
अर्को रूप तपाईको भ्रमणको योजना बनाउनुहोस् तपाइँ संग्रहालय भित्र हुने योजनाको समयको लागि हो: एक, तीन घण्टा? एक घण्टा मात्र तपाईं धेरै देख्नुहुने छैन तर यो अझै रोसेटा स्टोन, अश्शूरियन राहत र पर्थेननको मूर्तिकलाहरू हेर्न सम्भव छ, ऑक्सस ट्रेजर, the ऊरको शाही खेल, ला Katebet आमा, एक समुराई कवच, the Ife को राजा, the लुइस चेस सेट। भुईं फ्लोरमा सबैथोक, माथिल्लो तल्ला र तल्लो तल्ला।
तीन घण्टाको साथ भ्रमण बढाइनेछ र तपाईं थप वस्तुहरू थप्न सक्नुहुनेछ: एउटा इस्टर टापुको मूर्ति, स्लोएनको एस्ट्रोलाब, टाang सिरेमिक मूर्तिहरू, बस्ट अफ रम्सेस ग्रान्डe, automata मोडेलहरू, फेरोइज सर्प, चिनियाँ भादाहरू वा एक क्युनिफॉर्म लेख्ने ट्याब्लेट उदाहरणको लागि यसले बाढीको कुरा गर्छ।
तपाईं पनि सक्नुहुन्छ १०० विशेष चयनित वस्तुहरूमा मानव इतिहास अन्वेषण गर्नुहोस्, ला २० वस्तुहरूमा लन्डन ईतिहास वा इतिहास भर मानव विविधता। र यदि तपाइँ खेल्न र ब्रिटिश संग्रहालय मात्र हेर्न चाहानुहुन्न, यसले तपाईंलाई यो ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ। स्वयंसेवकहरूको सहायताले केहि संग्रहालय वस्तुहरू समात्नु सम्भव छ कि तपाईं आफ्नो प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ।
यो सम्भावना फेला पर्दछ प्रबुद्ध ग्यालेरी (कोठा १), संसारलाई संकलन गर्दै (कोठा १), बस्ने र मर्ने ग्यालेरी (कोठा १), रोमन ब्रिटेन ग्यालरी (कोठा १), पैसा ग्यालेरी (कोठा १), इस्लामी विश्व ग्यालरी (कोठा -42२--43) र चीन र दक्षिण एशिया ग्यालरी (कोठा) 33)। यो सँधै निःशुल्क हुन्छ।
अन्तमा संग्रहालयको वेबसाइट भ्रमण गर्न यो सल्लाह दिइन्छ किनकि त्यहाँ तपाईसँग अपडेट गरिएको जानकारी हुनेछ विशेष गरी यस बारे अस्थायी प्रदर्शनहरू। अब, उदाहरणका लागि, अप्रिल ११ र जुलाई २१ को बीचमा एडभर्ड मुन्चको बारेमा एक छ र मे २ 11 देखि अगस्त २ from सम्म मa्गाको बारेमा अर्को छ, लोकप्रिय जापानी कमिक। दुबैका लागि तपाईं अनलाइन बुक गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » ब्रिटिश संग्रहालयको भ्रमण गर्नुहोस्